समाचार::बुटवल – Butwal Online
५० लाख पुरस्कारको लोक स्टार हुदै, बुटवल अडिसनको तयारी पूरा
बुटवल २३ फागुन । लुकेर रहेको लोक संगीत विद्याको प्रतिभा खोजीका लागि नेपाल लोक स्टारको बुटवल अडिसनको तयारी पूरा भएको छ । सर्बाधिक राशी पुरस्कार भएको नेपाल लोक स्टारको बुटवल अडिसन फागुन २५ गते...
देवदह मेलाको अवलोकन गर्दै नेता भण्डारीले भने, ‘साना ब्यवसायिलाई मेलाले ठुलो गुन लगाउछ’
बुटवल, २२ फागुन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्न सके मुलुक समृद्ध हुने बताउनु भएको छ । उहाँले स्थानीय स्तरमा प्रायाप्त स्रोत साधन भएकाले तिनको उचित प्रयोग गर्न...
प्रदेश ५ सरकार महिला मैत्री छ ः मन्त्री आरती पौडेल
बुटवल फागुन २२ । महिला अधिकारको लडाइ अझैं बांकी रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपालमा अधिकारका नाममा कानुन बनेपनि कार्यान्वयनको पाटो निकै दयनीय रहेको उनीहरुको निश्कर्ष छ । १०९ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्वसन्ध्यामा रिपोर्टर्स...
रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला
जिल्ला अदालत कैलालीले टिकापुर हत्याकाण्डमा सांसद रेशमलाल चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको हो । त्यसैगरी १२ जनालाई तीन बर्ष कैदको सजाय सुनाएको छ भने...
बद्री पंगेनीको प्रश्न ः चर्चामा आउन की त मर्नेपर्ने की बिबादमा पर्नै पर्ने ?
कलाकारको गुनासो ः‘राज्यले चिन्नै सकेन,मिडियाले स्थान दिएनन् ’ कपिल ज्ञवाली २१ फागुन,बुटवल । राज्यले कलाकारिता क्षेत्रलाइ उचित सम्मान गर्न नसकेको कलाकारहरुले गुनासो गरेका छन् । बुटवलमा पांचौ अर्ना रनिङ्ग शिल्ड दोहोरी गीत प्रतियोगिता तथा सांस्कृतीक महोत्सवको...
सरकारको आधार बर्ष सफल भयोः घनश्याम भुसाल
नरेश के.सी. भैरहवा, फागुन २१ । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले सरकारको आधार बर्ष सफल भएको बताएका छन् । उनले धेरै समय पछि निर्माण भएको स्थायी सरकार नै सबै नेपालीको समृद्धिको आधार भएको तर्क...